Oro Agri Europe - Sayniska Waxaa Dabeeciyay Dabeecadda
Oro Agri Yurub
Shirkad Rovensa ah
Kala rog menu-ga
Daawada jirka lagu buufiyo
Bacriminta / Nafaqooyinka
Tilmaamaha Shirkadda 2021
Tusaha Dalagyada La Ilaaliyay
Tilmaamaha waxtarka leh
OROBAC ™ 100 Buug-yaraha Su'aalaha La Weydiiyo
Tilmaamaha Natiijooyinka Tijaabada Bataatiga
Tilmaamaha Codsiga Midhaha Pome
Tilmaamaha Natiijooyinka Tijaabada Cinabka
Mashaariicda R&D / Projetos de I&D
Sariqaha OSB-OXIDE iyo Biocide
Kormeerka Cleistothecia 2019
Kormeerka Cleistothecia 2018
OROMATE K26 ™ Su'aalo
Saldhiga Xogta Tijaabada
Hadafkeenu waa inaanu si joogto ah u ilaalino hal abuurka iyo bii'ada la doorbido ee ilaalinta dalagyada iyo xalalka kor u qaadista wax soo saarka ee suuqa.
Mashaariicda ay maalgalinayaan EU:
Ku Quudinta Dunida Hal-abuurnimo
Waxaan soo saareynaa badeecooyin amaan u ah isticmaaleha iyo deegaanka waxaanan siineynaa macaamiilkeenna xal wax ku ool ah, oo hadhsan
Qaababka gaarka ah ee ficillada iyo hababka loo adeegsado saxsanaanta alaabtayada ayaa lagu dabaqayaa iyadoo la raacayo tilmaamaha ugu dambeeyay si ay u noqdaan kuwo waxtar badan, haddana ammaan u ah deegaanka. Si aad wax badan uga ogaato, booqo qaybtayada Su'aalaha La Weydiiyo.
Eeg Qeybteena Su'aalaha La Weydiiyo
Qiimaynta guryaha ee codsiyada dayrta ee sameynta ay ku jirto saliida lagama maarmaanka ah ee laga soosaaray liinta liinta si loo yareeyo horumarka erysiphe necator cleisthotecia
Iyadoo la adeegsanayo R&D iyo kooxaha taageerada adeegga farsamada ee xaruntoodu tahay Yurub iyo adduunka waxaan marwalba raadineynaa badeecooyin cusub oo kobcin kara waxsoosaarka isla markaana sii wadi kara caafimaadka dalagga.
Maalgashiga Continuos R & D
Waxaan nahay bixiye horudhac ah oo amni leh, bey'ad ku habboon, ilaalinta dalagyada iyo xalalka hagaajinta wax soo saarka ee suuqyada caalamiga ah ee beeraha iyo macaamiisha.
Oro Agri International Ltd (oo hoos timaadda sumadeena ORO AGRI) waxay soo saartaa oo soo saartaa badeecooyin shati u leh dalabyada beeraha, guryaha iyo warshadaha adduunka oo dhan. Waxaan ku takhasusay alaabada aamin u ah isticmaalaha iyo bay'ada taas oo siin doonta macaamiilkeena wax ku ool ah, hadana xal haraa-la'aan ah.
Sayniska Awood Leh
Waxaa qoray Nature®
La soco wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan shirkadeena iyo alaabooyinka aamin u ah isticmaalaha iyo bay'ada isla markaana siiya macaamiilkeena xalka lacag la'aanta ah, ee hadhaaga ah.
Waxaan ku takhasusay alaabada amaan u ah isticmaalaha iyo bay'ada taas oo siin doonta macaamiilkeena xal wax ku ool ah, oo hadhsan. Qaybaha wax soo saarka waxaa ka mid ah caawiyayaal, sunta cayayaanka, qaboojiyeyaasha ciidda or quudinta foliar.
Farsamayaqaanadeena goobta waxay la shaqeeyaan daraasad wax ku ool ah goobta beeraleyda maxalliga ah waxayna ka caawiyaan qeybiyeyaasha kalfadhiyada tababarka si loo baro bulshada beeraleyda ah ee ku saabsan isticmaalka ORO AGRI kala duwanaanta alaabta
PREV-AM® dhammaan-hal-ku-dilista cayayaanka, fangaska iyo acaricide
OROGANIC ™ Hordhac
TRANSFORMER® Qaboojiye Ciid
WETCIT ™ Waxtar leh
Tilmaamaha Cayayaanka iyo Caarada
ORO AGRI Wada Shaqeeyayaasha
Hawlgelinta iskaashi istiraatiiji ah ayaa muhiim u ah awood noo siinta si loo ballaariyo xalalka aan u fidinno beeraleyda adduunka oo dhan. Wada-hawlgalayaashayada shaqeeya waxay bixiyaan adeegyo badan oo kala duwan oo naga caawiya inaan si joogto ah u keenno xalal cusub suuqa. Adeegyadan waxaa ka mid ah shahaado, tababar, cilmi baaris, iyo warbaahinta. Waxaan sidoo kale leenahay wada-hawlgalayaal ku hawlan horumarinta miyiga iyo bulshada, kuwaas oo ka shaqeeya sidii looga dhigi lahaa aqoonta iyo sayniska qof walbaa inuu helo. Waxaan si isdaba joog ah u balaarineynaa shabakadeena wada shaqeynta waxaana soo dhaweyneynaa cidkasta oo naga caawisa hubinta in wax soo saarkeena ay si sax ah oo hufan ay u adeegsadaan beeraleyda, iyadoo la ilaalinayo dalagyada iyo deegaanka.
Bixiye horudhac ah oo amni leh, bey'adeed ku habboon, ilaalinta dalagyada iyo xalalka hagaajinta wax soo saarka ee suuqyada caalamiga ah ee beeraha iyo macaamiisha.
Oro Agri International Ltd (oo hoos timaadda sumadeena ORO AGRI) waxay soo saartaa oo soo saartaa badeecooyin shati u leh dalabyada beeraha, guryaha iyo warshadaha adduunka oo dhan. Waxaan ku takhasusay alaabada amaan u ah isticmaalaha iyo bay'ada taas oo siin doonta macaamiilkeena xal wax ku ool ah, oo hadhsan.
Labadaba, marin u helkeena suuqyada iyo kala duwanaanta wax soo saarkuba way balaadheen oo hada waxay ku sugan yihiin sideetan iyo toddobo dal oo adduunka ah.
ORO AGRI Group waxay soo saartaa afar qaaradood oo kala duwan oo leh warshado ku yaal USA, Brazil, Koonfur Afrika iyo hadda Boortaqiiska.
ORO AGRI Group waxay leedahay dhowr teknoolojiyad patenti ah. Daraasaddeena ayaa had iyo jeer diirada saareysa helitaanka codsiyada cusub ee teknolojiyadeena.
Xullo qaybinta in ka badan 85 dal oo adduunka ah. In kabadan 2,000 + ganacsato ama tafaariiqleyaal iibiya alaabada ORO AGRI adduunka. 180 shaqaale oo ku kala nool in ka badan 23 waddan.
R&D iyo kooxaha taageerada adeegga farsamada ee xaruntoodu tahay Koonfur Afrika, Brazil, Mareykanka iyo Yurub. Qaabdhismeedka iyo shaybaarada hormarinta ee Portugal, Brazil, South Africa, iyo Mareykanka.
Waxaan soo saareynaa oo aan soosaarineynaa alaab patenti ah, waxaanan ku takhasusay alaabada amaan u ah isticmaaleha iyo deegaanka waxaanan siineynaa macaamiishayada xalka lacag la'aanta ah, ee hadhaaga ah.
Sayniska Awood Ku Leh Dabeecadda®
Degmada Estrada 533, Estrada do Lau
Shirkadda Oro Agri International BV
Shirka Global BioControl 2021
Soo bandhigida OROBAC ™ 100
Diiwaangelin / oggolaansho cusub
OROMATE K26® oo laga oggolaaday Faransiiska ANSES
Xuquuqda daabacaadda 2021 © ORO AGRI Europe. Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay
Waxaan u adeegsanaa cookies si aan kuu siino khibrad dalab fiican, falanqeyn ku sameyno taraafikada goobta, iyo shakhsiyeynta waxyaabaha. Akhriso sida aan u isticmaalno buskudka iyo sida aad u xakameyn karto adiga oo gujinaya "Dookhyada Asturnaanta." Haddii aad sii wado isticmaalka boggan, waad oggolaatay isticmaalkayaga 'cookies'.
Kukiyadaha Falanqaynta iyo Kaydinta
Waad ku mahadsantahay booqashada shabakada ORO AGRI iyo dib u eegida siyaasadeena asturnaanta. Nidaamkeena asturnaanta waa mid fudud: ma ururin karno macluumaad shaqsiyadeed oo adiga kugu saabsan markii aad booqato degelkeenna oo aan ka aheyn cinwaanka IP-ga ee aad ka soo gasho si uu kuugu diido waddanka gaar ahaan goobta alaabteenna. Tan waxaa loo sameeyaa si laguugu sahlo. SIDAN SIDEE AYAAN UGU QAADANAYNAA MACLUUMAAD KU SAABSAN BOOQASHADA AAD WEBSITE-kayaga: Macluumaadka la ururiyey oo si otomaatig ah loo kaydiyay Websaytka ORO AGRI si otomaatig ah uma ururiyo ama uma kaydiyo wixii macluumaad ah ee ku saabsan wixii codsi ah ee la helo. Si kastaba ha noqotee waxaan aqoonsan nahay cinwaankaaga IP-ga si aan dib ugu xididno isticmaale awood gaar ah u leh websaydhka waddanka ku habboon. E-mailka E-mailka loo gudbiyey ORO AGRI waxaa laga helayaa koontada emaylka ee ku jirta info@oroagri.com ama legal@oroagri.com laakiin laguma kaydiyo shabakadda shabakadda gebi ahaanba. Isticmaalka Kukiyada Joogtada ah iyo Teknolojiyada Raadinta Ma isticmaalno cookies-ka joogtada ah ama tiknoolajiyada raad-raaca ee joogtada ah, sida kuwa loo adeegsado u-habeynta kal-fadhi ee booqdayaasha ku soo laabanaya, boggayaga internetka. Marka casharkaaga la dhammeeyo, buskudku wuu dhammaanayaa. Haddii aad wax su'aalo ah ama walaac ah qabtid, fadlan nagala soo xiriir cinwaanka e-maylkeenna ah sharci ah@oroagri.com
Kukiyadaani si adag ayey lagama maarmaan u yihiin inay ku siiyaan adeegyo laga heli karo websaydhadeena iyo in la isticmaalo qaar ka mid ah astaamaheeda, sida helitaanka aagagga aaminka ah. Sababtoo ah buskudyadan ayaa si adag lagama maarmaan u ah bixinta shabakadaha, ma diidi kartid iyaga oo aan saameyn ku yeelan sida ay websaydhadeenu u shaqeeyaan. Waad joojin kartaa ama tirtiri kartaa adiga oo beddelaya dejimaha biraawsarkaaga, sida lagu sharraxay hoosta cinwaanka "Sideen u xakameyn karaa cookies-ka?" Bayaanka Cookie-ka.
Kukiyada la Isticmaalay
gdpr [oggolaanshaha_cookies], gdpr [oggolaansho_types], wc_cart_hash_ #, wc_fractions_ #
Kukiyadaani waxay soo ururiyaan macluumaadka loo adeegsado qaab iskudhaf ah si ay nooga caawiyaan inaan fahamno sida loo adeegsado degelladayada ama ay nooga caawiyaan inaan kuu qaabeyno boggeena internetka si aan kor ugu qaadno khibradaada.
_ga, _gat, _gid, ururi
Cookie-kan waxaa loo isticmaalaa in lagu diro xogta Google Analytics oo ku saabsan aaladda booqdaha iyo habdhaqankiisa. Waxay la socotaa booqdaha guud ahaan aaladaha iyo wadiiqooyinka suuqgeynta. Cookie-kan waxaa loo isticmaalaa in looga dhigo fariimaha xayeysiinta kuwa adiga iyo danahaagaba ku habboon. Waxay sidoo kale qabataa howlo sida ka hortagga isla xayeysiiska inuu si isdaba joog ah u soo muuqdo, hubinta in xayeysiiska si habboon loo soo bandhigo, iyo mararka qaarkood xulashada xayeysiisyada ku saleysan danahaaga.
r / urursi